‘तपाईं भूमिगत कि अर्धभूमिगत ? स्वदेशमा कि विदेशमा ? प्रचण्ड नेतृत्व समयकै जस्तो त होइन ? [हेर्नुहोस ताजा अन्तर्वार्ता] | CNNepal
‘तपाईं भूमिगत कि अर्धभूमिगत ? स्वदेशमा कि विदेशमा ? प्रचण्ड नेतृत्व समयकै जस्तो त होइन ? [हेर्नुहोस ताजा अन्तर्वार्ता]
बिप्लव संगको समसामयिक बिषयमा लिएको ताजा अन्तर्वार्ता ।
असार ६ , काठमान्डौ ।
photo : postpati
हाम्रो परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य हो । यो व्यवस्थाले जनताको जीवनलाई कष्टकर, कङ्गाल, पराधीन मात्र बनाएको छ । देशलाई टाट पल्टाउँदै लगेको छ । देशलाई बेचेर खानेबाहेक केही गरेको छैन । हामी यसलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ । अनि हामीले स्थापना गर्न चाहेको राज्यसत्ता वैज्ञानिक समाजवाद हो जुन व्यवस्थामार्फत पुँजीवादले मानव जीवनमा लादेका सारा विभेद, उत्पीडन, शोषण,लुट, अशान्ति, युद्ध, अतिक्रमणलाई समाप्त पार्दछ । साथै यसले जनताका लागि समानता र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दछ ।
Previous articleधादिङमा जिप दुर्घटना हुँदा ५ को मृत्यु, १० जना गम्भीर घाइते [नामसहित]
Next articleतथ्यहीन समाचारको आधारमा प्रताडना कहिलेसम्म ?